Member CIN Information Service
साझा खबरहाम्रो बारेमा अन्तर्वार्तासमाजजीवनशैलीब्लग / बिचारसामुदायिक मेलमिलापमनले देखेको संसार समाचारहरु ‘लोकतन्त्रको घाम झुल्किएन झुपडीमा’ (अडियो)
काठमान्डु । लोकतन्त्रको ११ वर्ष राजनितिक दलहरुले सत्ता संघर्षमै समय बिताएको कतिपय नागरिकको बुझाई छ । शासन ब्यवस्था फेरिने बित्तिकै आफ्नो अवस्था फेरिने बुझेका नागरिक नेताहरुको काम गराईबाट स्वभाविक रुपमा सन्तुष्ट छैनन् । लोकतन्त्र ल्याउन गरिएको त्यो जनआन्दोलन र त्यसपछिको ११ वर्षमा हाँसिल भएको उपलब्धीको लेखाजोखा गर्दा थोरै सन्तोषको श्वास फेर्न ठाउँ नभएको पनि होईन । सम्झनामा जनआन्दोलन–२ ।
पुरा समाचार रुविनको सारङ्गीलाई नआएको लोकतन्त्र March 30, 2015
काठमान्डु । २०६२⁄०६३ को जनआन्दोलन भएको ११ वर्ष पुग्यो । जनआन्दोलनको बलमा आएको गणतन्त्र संस्थागत हुने चरणमा छ । आन्दोलन सफल पार्न २५ जना सहिद भए, कयौं घाईते भए । हजारौंले सडकमा उभिएर चर्का नारा लगाए । त्यहि भीडमा उभिएर सारङ्गी रेट्दै आन्दोलनका गीत गाएर लोकप्रिय बन्नुभयो रुविन गन्धर्व । ब्यवस्था र अबस्था फेरियो तर सारङ्गीको कथा अझै फरिएको छैन ।
पुरा समाचार सरकार र मधेसी मोर्चाबीच आज पनि छलफल
हिजोको छलफलबाट सहमति नजिक पुगेको सरकार र मधेसी मोर्चाबीच आज निर्णायक वार्ता हुँदैछ । संशोधन विधेयक विधेयकलाई परिमार्जनसहित फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएपछि मोर्चाले सहमति जनाएको हो । हिजो भएको छलफलबाट दुवै पक्ष सहमति नजिक पुगेका हुन् । पुरा समाचार उम्मेदवारको आकांक्षीः कोही जानकार, कसैको रहर March 30, 2015
बैशाख ३१ गतेको चुनाब पछि देशमा स्थानीय तहको सरकार गठन हुने छ । जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा सदस्यमा विजयी हुन्छन् । उनीहरुले आफ्नो गाँउ वा नगरपालिकामा गर्नुपर्ने कामहरु असिमित छन् । उम्मेदवार उठ्नेलाई आफुले गर्नुपर्ने काम र कर्तव्यका बारेमा थाहा छ ? के–के छ जितेपछिको जिम्मेवारी ? पुरा समाचार हर्न निषेध : विस्तारै कम हुँदै हर्न बजाउने बानी
भक्तपुरको दूधपाटीबाट गुडेको एउटा बसले पुरानो बसपार्कसम्म आइपुग्दा एक पटक पनि हर्न बजाएन । गाडीका चालक दिपक पुरीलाई सरकारको यो कदम राम्रो लागेको छ तर हर्न बिना सवारी चलाउँदा निकै सावधानी अपनाउनु पर्ने उहाँको अनुभव छ । पुरा समाचार आचारसंहिता उल्लंघन गर्दै विद्यालयमा कार्यक्रम
दार्चुलामा नेपाली कांग्रेस शैल्यशिखर नगरपालिका वडा नम्बर ५ को वडा समितिले आचारसंहिता उलंघन गर्दै विद्यालयमा कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।
पुरा समाचार अलैँचीको बेर्नामा ओखलढुंगा आत्मनिर्भर
ओखलढुंगा जिल्ला अलैँचीको बेर्नामा आत्मनिर्भर बनेको छ । जिल्लामा बेर्ना उत्पादनलाई निरन्तरता दिन सके बाहिरबाट झिकाउनु नपर्ने कृषि बिकास कार्यालयले जनाएको छ । पुरा समाचार डिएसपी विरुद्ध उजुरी दिने महिला प्रहरी झन् तनावमा
कार्यस्थलमा दुव्र्यवहार गरेको आरोपमा जिल्ला प्रहरी प्रमुख (डिएसपी) विरुद्ध विभागमा उजुरी दिएकी एक महिला प्रहरीले उल्टै मानसिक तनाव भोग्नुपरेको छ । पुरा समाचार भक्तपुर बोडेमा जिब्रो छेड्ने जात्रा आज March 30, 2015
भक्तपुरको बोडेमा शनिबार जिब्रो छेड्ने जात्रा हुँदैछ । हरेक वर्ष वैशाख २ गते बोडेमा नेवार (श्रेष्ठ) समुदायका व्यक्तिले जिब्रो छेड्ने चलन छ । पुरा समाचार सिन्धुपाल्चोकमा महिला नेताको चर्चा ‘उप’ मा मात्रै
देवराज सुवेदी, रेडियो मेलम्ची सिन्धुपाल्चोक
स्थानीय निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलभित्र उम्मेदवारको चर्चा पनि चुलिँदै गएको छ । प्रमुख पदहरुमा चर्चा हुँदा महिलाको नाम कुनै पनि पार्टीले पारेको पाईंदैन । पुरा समाचार 123 > Last ›
कस्ता नेतालाई जिताउने ? भुकम्पको दूई वर्षः सुस्त पुनर्निमाण
‘लोकतन्त्रको घाम झुल्किएन झुपडीमा’ (अडियो)
रुविनको सारङ्गीलाई नआएको लोकतन्त्र बैशाख ३१ को निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता १८ गते
बैशाख ३१ र जेठ ३१ मा चुनाव गर्ने सरकारको निर्णय
माओवादी केन्द्रद्वारा गठबन्धनसँगको सहमति अनुमोदन
संघिय गठबन्धन पनि चुनावमा जाने रेडियो कार्यक्रम
भुकम्प पछिको जीवन रक्षा
सुरक्षित गन्तव्य हाम्रो भविष्य
बाचौं र बचाऔँ
Tweets by @cinsajhakhabar
Member © 2015 Community Information Network | All Rights Reserved.